Shiinaha Mashiinka mesh mesh laba geesood ah soo saarista iyo Warshad | Youte Makiinado
Mesh siligga laba geesoodka ah waa mesh silig ka samaysan mesh silig ah (hexagonal) oo laga sameeyay siligyo bir ah. Dhexroorka siligga la isticmaalay ayaa ku kala duwan hadba cabirka mesh siligga laba geesoodka ah. Shabakado yaryar oo laba-geesood leh oo leh lakabyo bir ah oo galvanized ah ayaa badanaa isticmaala fiilooyin bir ah oo dhexroorkeedu yahay 0.4-2.0 mm, kuwa kuwa leh lakabka PVC-na waxay badanaa isticmaalaan fiilooyinka biraha ee PVC oo dhexroorkoodu yahay 0.8-2.0 mm. Noocan shabakadda laba geesoodka ah waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa shabakadda go'doominta ee dhul beereedka, xayndaabka daaqa, qafiska xoolaha iyo xoojinta darbiga dhismaha. Tani waa wax soo saar aad u rajo badan.
LSW togan iyo taban biraha qaloocsan ee mesh laba geesoodka ah ee ay soo saarto warshadeenu waa nooc cusub oo mesh loom ah oo nuugaya farsamada casriga ah iyo qaabdhismeedka, wuxuu qaataa teknoolojiyadda horumarsan ee gudaha, wuxuuna leeyahay astaamo u gaar ah. Taxanaha alaabtan waxay korsadaan tiknoolajiyada tolnimada ee mabaadi'da horay iyo gadaalba si ay si toos ah u soo saaraan birta laba geesoodka ah ee gees laba geesoodka ah ee ku habboon qeexitaanka goomaha Hada waxaa jira noocyo kala duwan sida 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 1.2 inch, 1.5 inch, 2 inch, 3 inch, iwm. Mashiinno kala duwan iyo qalab kale ayaa sidoo kale loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Mashiinka biraha laba geesoodka ah ee birta leh wuxuu leeyahay astaamaha naqshad macquul ah, qaab dhismeed fudud, hawlgal deggan, waxqabad wanaagsan, faa'iido sare iyo dayactir ku habboon. Loo dhoofiyo Yurub, America, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika iyo dalal kale iyo gobollo.
1.With qalab jejebiyey xajin, waa la rujin karaa, mashiinku si habsami leh ayuu u socdaa dhawaquna waa hooseeyaa;
2. Ku rakib joogsiga iyo miiska gawaarida otomaatigga ah ee jaban. Marka silig jaban uu dhaco inta lagu gudajiro howsha mashiinka, shabakada jabsan ama mitirka dhererku si otomaatig ah ayuu u istaagi doonaa markuu meesha joogo, iyo qeylodhaanta; in la yareeyo shabakadda jabtay lana hagaajiyo waxtarka wax soo saarka;
3. Meshku waa mid hagaagsan oo xitaa, waxaana lagu xoojin karaa dhexda mesh kasta si kor loogu qaado awoodda miiqashada ee mesh;
4. Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa nidaam sifeyn otomaatig ah, kaas oo qaata sifaynta bartamaha, taas oo ku habboon in la isticmaalo;
5. Ballaadh saafi ah, balac mashiinka 2.6mm-6mm, ayaa tolali kara shabagyo badan isla mar ahaantaana, si wax ku ool ah u kordhin kara wax soo saarka.
Hore: Mashiinka mesh silig laba geesoodka ah oo otomaatig ah
Xiga: Mashiinka Net Net
Cage Chicken Cage Hexagonal Mashiinka
Mashiinka Mashiinka mesh laba geesood ah
Mashiinka Shabakada silig laba geesoodka ah
Mashiinnada Shabakada Xargaha ee Hexagonal